Sumcadda Islaamka iyo Su’aalaha Sayniska – Maandoon
September 23, 2016 January 3, 2017 Cabdullaahi M. Cawsey 1 Comment Cabdullahi M. Cawsey
Maalin dhexdaas ah ayaanÂ Â booqday Matxafka Taariikhda Sayniska ee Jaamacadda caanka ah eeÂ Â Oxford.Â Â Intii aan dhex wareegayay matxafka waxaan ku arkey qayb dhan oo loo gaaryeelay kaalinta iyo taariikhdaÂ Â Islaamku ka qaatay hormarka cilmiga Sayniska. Taariikhda qoran waxay xusaysaa waqti dunida Islaamka loo soo doonan jiray sayniska iyo culuumta casriga ah.
Tusaale ahaan sannadihii u dhaxeeyay 900- 1200 CD (=Ciise dabadi), ayaa ah waqti dahabi ah- golden age- oo saynisku si fiican ugu bullaalay dunida muslimka. Waqtigaas muslimiinta ayaa ahaa hormuudka guud ahaan hal-abuurka iyoÂ Â cilmiga sayniska.
Qoraalkaan wuxuuÂ Â ku saabsanyahay doodaha cilmiga ah ee ku saabsan sumcadda diintaÂ Â Islaamka iyo muslimiintu ay ku leeyihiin hormarintaÂ sayniska. Sidoo kale qoraalka wuxuu dul istaagi doonaa doodaha cilmiga ah ee ku aaddan sababaha ka danbeeyaÂ Â Â dib u dhaca dhanka cilmiga sayniska ah ee waqtigan ka jira dunida muslimka.
Waxaan ognahay waqtiyadan la joogo in dunida muslimku aad ugu danbayso hormarka laga gaaray aqoonta sayniska. Tusaale ahaan, cilmi baarisyadii sayniska ahaaÂ Â ee Jaamacadda Harvard kaliya ayÂ Â soo saartay sanadkii 2005 ayaa ka badnaaÂ Â dhamaan cilmi baarisyadiiÂ Â ay soo saareen toddobo iyo toban waddan oo carab ah oo la isku daray (Eeg: Economist, Jan 26, 2013).
Aqoonyahannada waqtigan jooga qaarÂ Â baa ku dooda in diinta Islaamka iyo saynisku si lama filaan ah col iyo cadaawo u noqdeen; balse dooddaas waxaa daaqadda kala baxaya taarikhda qotoda dheer ee Islaamka iyo sayniska ee aanÂ Â ku soo arkay matxafka Jaamacadda Oxford.Â Â Taariikhdan waxay muujinaysaa in muslimiinta hadda ka hor qaab miyir qab ah maskaxdooda ugu fureen fursadaha laga heli karo falsafadda iyo aqoonta sayniska.
Tusaale ahaan,Â Â magaalooyinka Baqdaad, iyo Dimishiq ayaa ahaaÂ Â magaalooyin loo soo doonan jiray culuumta kala ah caafimaadka, xisaabta iyo cilmiga beerahaÂ Â mudaddii u dhaxeysay 900-1200 CD. Haddaba suâ€™aasha is weydiinta mudan ayaa ah maxaa qaldamay oo daaqadda kala baxay hormarkii sayniska ee dunida Islaamka ka hanaqaaday?
Aqoonyahanno badan oo ujeeddooyin kala duwan leh ayaa isku dayay in ay suâ€™aashan qaab cilmi ah uga jawaabaan. Tusaale ahaan, Muzaffar Iqbal ayaa buuggiisa Sayniska iyo Islaamkaâ€œScience and Islamâ€ ku qaada dhigay saddex marxaladood oo Islaamka iyo sayniska isla soo mareen.
Marxaladda koowaad wuxuu mudane Muzaffar ku sheegay in ay bilaabatayÂ Â waqti ku beegan qarnigii sideeddaad.Â Â Waana markii si fiican falsfadda iyo sayniskaÂ Â looga soo dhaweeyay dunida islaamka. Waqtigaas qaaradda Yurub waxaa ka jiray aqoon darro iyo dagaallo faraha looga gubtay oo qaaradda ka dhigay deegaan mugdi ah.
Marxaladda labaad waa waqtigii reer Yurub mugdiga ka baxeen oo murqaha la soo baxeen si ay u adoonsadaan ummadaha kale. Waqtigaan waxaa dunida muslimka soo booqday aqoonta sayniskaÂ Â oo ku daaban gumeysigii reer Yurub.Â Â Halka marxaladda sadexaadna bilaabatay wixii ka danbeeyay bartamihii qarnigii labaatanaad oo ku beegan waqtigii waddammo badan oo muslim ahÂ Â xornimada ka qaateen gumeysigii reer Yurub.
Saddexda marxaladood ee mudane MuzaffarÂ Â ku dooday in Islaamka iyo Sayniska isla soo mareen, waxaa ku hoos qarsoon in Sayniska marwalba marti ama kooyto ku ahaa dunida muslimka. Haddii si fiican loo sii guda galo taariikhda muslimiinta iyo sayniska waxaa kuu so baxaya in qaybo badan oo xisaabta ka mid ah in ay ka hanaqaadeen dunida muslimka. Sidaa daraadeed doodda mudane Muzaffar ma ahan dood dhamaystiran.
Waxaa jira doodo kale oo qaba in muslimiinta iyo sayniska waligood isku dhibbanaayeen. Aqoonyahannada dooddan soo bandhiga waxay ku doodaan in suâ€™aalaha saynisku is weydiiyo yihiin kuwo kuÂ Â qotoma xaqiiqooyinka ka muuqda nolosha iyo deegaanka dabiiciga ah- positive statements, halka suâ€™aalaha diimuhu badanaa ku mashquulaan u badanyihiin suâ€™aalo ku saabsan waxyaabo la sheegay in ay fiicanyihiin ama xunyihiin sida xaaraan iyo xalaal oo kale â€“ Normative statements.
Tusaale ahaan, saynisku wuxuu ka jawaabaa suâ€™aalaha cilmiga ah- positive statement sida: waa maxay sababaha dabiiciga ah eeÂ Â ka danbeeya dhul-gariirada ka dhaca qaybo ka mid ah dhulka? Aqoonyahannada qaba in islaamka iyo sayniskuÂ Â isku dhibanyihiin waxay qiil ka dhigtaan in qarnigan la joogo qaar badan oo ka mid ahÂ Â culimada fiiskiska ee reer Pakistan aamminsayihiin in dhul-gariirada ka dhaca gobollo ka tirsan PakistanÂ Â sababeen danbiyo xaaraan ah sida galmo iyo tumasho lagu dufoobay- Normative statements.
Dhanka kale,Â Â waxaaÂ Â jira dood kale oo aqoonyahanka qaar soo gudbiyaan taas oo ku doodaysa in Islaamka iyo Sayniska aysan dhibaato sidaa u buurani u dhaxeynin. Aqoonyahanka sidan ku doodaya waxay qabaan in buuqa iyo isqab-qabsiga ka dhex socdaÂ Â sayniska iyo diinta islaamka ay ka danbeeyeen duruufo gaar ah ooÂ Â la soo darsay muslimiinta iyo wadaaddo wareersan oo dhaawacay sumcadda Islaamku ku dhexÂ Â leeyahay kacaanka casriga ah ee aqoonta sayniska. Aqoonyahanka doodda noocan ah qabaÂ Â waxay soo qaataan dhacdooyin taariikhi ah oo sababay dib u dhaca muslimiinta ka muuqda marka ay timaaddo hormarka sayniska. Â Tusaale ahaan,Â Â arrimo ay ka mid yihiin burburkii ku yimidÂ Â qarnigii 13aadÂ Â hannaankii iyoÂ Â hormarkii laga gaaray beerashada, weerarradii dunida muslimka ay ku soo qaadeen Mangooliyiintii,Â Â qalalaasihii iyo is qabqabsigiiÂ Â siyaasadeed ee muslimiinta ka dhex dhacay iyo soo shaac bixiddii kooxo mayal adag ooÂ Â aan u dulqaadan karin kala duwanaanshaha fikirka diineed ayaa la tilmaamayaa in ay sababeen in hormarkii sayniska ee dunida muslimka uu hakad galo!
Dhanka kale, ragga qaba aragtida ah in duruufo adag oo la soo darsay muslimiinta daaqadda kala baxeen dadaalladii sayniska ee socday waxay ku sii daraan dood kale oo lagu duqeynayo qaar ka mid ah culumaaâ€™udiin ilbax ahaa oo muslimiinta u soo baxay Qarnigii 11aad.Â Â Ragga sida weyn loo duqeeyo ayadoo lagu eedaynayo in ay isbaaro u dhigteen hormarkii sayniska ee dunida muslimka ka socday waxaa ka mid ah CaalimkiiÂ Â diinta ee lagu magacaabi jiray Hamid Muhammad al-Ghazali . Mudane al-Ghazali wuxuu noolaa sanadihii u dhaxeeyay 1059-1111 AD.
Doodaha loo haysto caalimka weyn ee al-Ghazali waxaaÂ Â ugu culus in uu adeegsaday farasamooyinkii aqoonta faslafadda asagoo isbaaro u dhiganaya faaâ€™idooyinka u gaarka ah falsafadda. Tusaale ahaan buuggiisa caanka ahaaÂ Â is diidka falaasifada wuxuu ku weerarayÂ suâ€™aalaha iyo weydiimaha cilmiga ah ee sayniska kaga jawaabi karoÂ Â xaqiiqooyinka ka muuqda nolosha iyo deegaanka dabiiciga ah.
Aqoonyahannada weeraray oday al-Ghazali waxay ku doodaan in muslimiintu waa hore reer galbeedka kula tartamiÂ Â lahaayeen in ay doodaha faslafadda ku tijaabiyaan farsamooyinka casriga ah ee sayniska â€“scientific inquiry-Â kuwaas oo lagu kala saafo runta iyo beenta haddii aysan jiri lahayn isbaarada uu dhigtay shiikhÂ Â al-Ghazali. Waa eed aad u culus oo u baahan in si caddaalad ah loo qaadaa-dhigo.
Waxaan soo ogaannay doodaha ugu waaweyn ee laga qabo dib-u-dhaca aqoonta sayniska ee ka muuqda dunida muslimka. Haddii doodahaas kala duwan la is bar-bardhigo, waxaa ugu miisaan culus doodda ku baaqaysa in Islaamka iyo sayniska dhibaato sidaa u buuran aysan ka dhex aloosnayn marka la eego taariikhda qotoda dheer ee muslimiinta ay isla soo mareen hormarinta sayniska. Sida ku cad taxanaha taariikhda, dhibaatooyinkii dhacay qarniyadii 11aad illaa 12aad iyo waliba soo shaac bixii wadaaddo xoogaa wareersanÂ Â oo diinta Islaamka ka dhigtay dukaan ay ka ganacsadaan ayaa ah sababahaÂ Â ugu waaweyn ee ka danbeeya laangaabnimada ka muuqata sayniska marka la joogo dunida muslimka.
IqbÄl, M. (2007).Â Science and Islam. Greenwood Publishing Group.
← Wax iswaydiini ma xumee wax is waydaaris baa daran!
Wadaad Dawakhsan iyo Waranle Deyaysan! →
One thought on “Sumcadda Islaamka iyo Su’aalaha Sayniska”
Sxb dhibaatooyin badan ayaa kajira maanta dunida muslimka, waayo dadku halkii ay dulmiga sayniska kabaran lahaayeen waxaa lagumashquuliyey quraafaad! Wadaad maamule ka ah iskool iyo dugsi iskujira ayaan maalin waydiiyey, sheekhoow maxaad kaqabtaa in dhulka wareego, qorraxduna taagantahay? Markaasuu kujawaabay , waxaas waa khuraafaad! Waxaan haddana waydiiyey, oo maxaad ardayda khuraafaadka ugu dhigtaan, illeen juqraafiga saas ayaa kuqorane? Kuye, imtixaanka ayey kubaasayaan! Ilaahoow unaxariiso, hadda wuu dhintay! Markaa dad badan ah ayaa waddankii qabsaday!